Zụta Methylprednisolone ntụ ntụ (83-43-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Methylprednisolone ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụpọ Methylprednisolone (83-43-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Methylprednisolone ntụ ntụ video
Methylprednisolone ntụ ntụ isi agwa
aha: Methylprednisolone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C22H30O5
Ọbara arọ: 374.47
Methylprednisolone ntụ ntụ na nhazi ozubu
Aha Igwe: Methylprednisolone ntụ ntụ, Medrol, Medrol Dosepak, Methylpred-DP
Aha aha: Methylprednisolone ntụ ntụ, Sulu-Medrol ntụ ntụ, Depo-Medrol ntụ ntụ, 83-43-2
Methylprednisolone ntụ ntụ Usage
MEDROL Tablets nwere Methylprednisolone ntụ ntụ nke bụ glucocorticoid. Glucocorticoids bụ ọgwụ ndị na-adrenocortical, ma nke na-emekarị ma na-emepụta sịntetị, bụ nke sitere na akụkụ eriri afọ. Methylprednisolone raw ntụ ntụ na-apụta dị ka ọcha ka ọ fọrọ nke nta na-acha ọcha, odorless, crystalline ntụ ntụ. A na-etinye ya na mmanya, na dioxane, nakwa na methanol, nke dị ntakịrị soluble na acetone, nakwa na chloroform, ma dịtụ soluble na ether. Ọ bụ ihe a na-apụghị ịmepụta mmiri n'ime mmiri. MEDROL (Methylprednisolone ntụ ntụ) Mbadamba ụrọ maka nchịkwa ọnụ bụ 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg ma ọ bụ 32 mg nke ntụpọ Methylprednisolone.
Were Methylprednisolone raw ntụ ntụ site n'ọnụ dịka dọkịta gị gwara gị, na-ejikarị nri ma ọ bụ mmiri ara ehi. Soro ntuziaka nlezi gị nlezianya. Usoro ọgwụgwọ na ogologo usoro ọgwụgwọ na-adabere na ọnọdụ ahụ ike gị na nzaghachi nye ọgwụgwọ. Usoro usoro dosing dị iche iche dị maka ọgwụ a. Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ọgwụ ahụ kwa ụbọchị maọbụ ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ a ụbọchị ọ bụla, ọ nwere ike inye aka iji kaa akara gị na ncheta. Gaa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Ejila methylprednisolone ntụ ntụ ma ọ bụ jiri ọgwụ a na-emekarị ma ọ bụ karịa ogologo oge. Ọnọdụ gị agaghị eme ka ọ dịkwuo ngwa ngwa, ihe ize ndụ gị nwere mmetụta mmetụta ga-abawanye.
Medrol nke mbụ (Methylprednisolone raw powder dosage) nwere ike ịdị iche site na 4 mg na 48 mg nke Methylprednisolone ntụ ntụ kwa ụbọchị dabere na kpọmkwem ọrịa ọrịa na-emeso. N'ọnọdụ ndị na-adịchaghị ala, ọ ga-ezuru n'ozuzu ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara ahọpụtara kacha elu nwere ike ịchọrọ. A ghaghị ịnọgide na-edozi ma ọ bụ gbanwee usoro ọgwụgwọ mbụ ruo mgbe a ga-azaghachi mmeghachi omume dị mma. Ọ bụrụ na mgbe oge ezi uche dị, enweghi mmeghachi omume na-enye afọ ojuju, MEDROL (Methylprednisolone ntụ ntụ) kwesịrị ịkwụsị ma onye ọrịa zigara na ọgwụgwọ ọzọ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na a ghaghị imesi ya ike na usoro ọgwụgwọ dị iche iche bụ ihe dịgasị iche iche ma a ghaghị imepụta ya n'otu n'otu n'ihi ọrịa ahụ na ọgwụgwọ na nzaghachi nke onye ọrịa ahụ. Mgbe ekwesịrị ikwu okwu ọma, a ghaghị ikpezi usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị site n'ịbelata usoro ọgwụgwọ mbụ n'ime obere obere oge n'oge oge kwesịrị ekwesị ruo mgbe ọ kachasị dị ala nke ga-anọgide na-enweta ezigbo nlekọta ahụike. Ekwesiri iburu n'uche na ichoputa nlekota anya mgbe nile n'ihe banyere onu ogwu. Gụnye na ọnọdụ ndị nwere ike ime mgbanwe nhazi ụbụrụ dị mkpa bụ mgbanwe na ọnọdụ ahụike nke abụọ na mgbatị ma ọ bụ mmekpa ahụ na usoro ọrịa ahụ, ngwọta nke onye ọrịa ahụ, na mmetụta nke ịmịga ọrịa na ọnọdụ ndị siri ike na-adịghị metụtara ọrịa ahụ dịka ọgwụgwọ; na ọnọdụ ikpeazụ a, ọ nwere ike ịdị mkpa iji mụbaa MEDROL (Methylprednisolone raw powder) maka oge na-adabere n'ọnọdụ ọrịa onye ahụ. Ọ bụrụ na ọgwụgwọ ogologo oge a ghaghị ịkwụsị ọgwụ ahụ, a na-atụ aro na a ga-ewepụ ya nwayọọ nwayọọ kama iji nwayọọ nwayọọ.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ Methylprednisolone
Tupu iwere Methylprednisolone ntụ ntụ,
1) gwa dọkịta gị na onye na-ahụ maka ọgwụ ike ma ọ bụrụ na Methylprednisolone ntụ ntụ, ọgwụ aspirin, tartrazine (ihe na-acha odo odo na ụfọdụ ihe oriri na ọgwụ ọjọọ), ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ.
2) gwa dọkịta gị na onye na-enye ọgwụ na ọgwụ ndị ị na - aṅụ na ọgwụ ndị ị na - ejighị, karịsịa anticoagulants (ọbara thinners) dịka warfarin (Coumadin), ọgwụ arthritis, aspirin, azithromycin (Zithromax), clarithromycin (Biaxin), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), digoxin (Lanoxin), diuretics ('mmiri'), erythromycin, estrogen (Premarin), ketoconazole (Nizoral), ọgwụ mgbochi ọnụ, phenobarbital, phenytoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), theophylline (Theo-Dur), na vitamin.
3) ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa fungal (ma ọ bụghị na akpụkpọ ahụ gị), anaghị ewere Methylprednisolone raw ntụ ntụ na-ekwughị dọkịta gị.
4) gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwere ma ọ bụ nwee afọju, akụrụ, nsia, ma ọ bụ ọrịa obi; ọrịa shuga; underactive thyroid gland; ọbara mgbali elu; ọrịa uche; myasthenia gravis; osteoporosis; ọrịa herpes anya; mgbawa; ụkwara nta (TB); ma ọ bụ ọnya.
5) gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị dị ime, na-ezube ịtụrụ ime, ma ọ bụ na-enye gị ara. Ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-ewere Methylprednisolone ntụ ntụ, kpọọ dọkịta gị.
6) ma ọ bụrụ na ịwa ahụ, gụnyere ịwa ahụ eze, gwa dọkịta ma ọ bụ dọkịta eze na ị na-ewere Methylprednisolone raw ntụ ntụ.
7) ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ihe mere eme nke ọnya ma ọ bụ buru ọgwụ aspirin dị ukwuu ma ọ bụ ọgwụ ogbu na nkwonkwo ọzọ, belata ịṅụ mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Methylprednisolone ntụ ntụ na-eme ka afo na eriri afọ gị nwee ike ịṅụbiga mmanya ókè, ọgwụ aspirin, na ọgwụ ụfọdụ ogbu na nkwonkwo. Mmetụta a na-eme ka ọnyá gị dịkwuo.
Methylprednisolone raw ntụ ntụ bụ nke a na-akpọ glucocorticoids. Otu òtù ọgwụ ọjọọ bụ otu ìgwè ọgwụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. A na-ejikarị ọgwụ ndị a eme ihe banyere ọnọdụ ndị yiri ya.
Methylprednisolone ntụ ntụ na-arụ ọrụ site n'ịbelata mbufụt ma gbanwee nzaghachi nke ahụ gị. Nke a na-ebelata mmetụ kpatara ọnọdụ gị.
A na-eji methylprednisolone raw ntụ ntụ mee ihe iji nweta mmetụ ngwa ngwa nke mbufụt. Ihe atụ nke mkpali na-egbuke egbuke nke Methylprednisolone ntụ ntụ na-agụnye gụnyere:
ọrịa ogbu na nkwonkwo,
-systems lupus erythematosus,
-ọbụ ọrụ arthritis,
-psoriatic ogbu na nkwonkwo,
-azụlite colitis, na
Ọrịa ọrịa Chukwu.
Ọnọdụ nhụjuanya siri ike nke na-emeghị ọgwụgwọ nke ọma nwekwara ike ịza Methylprednisolone raw ntụ ntụ. Ihe atụ gụnyere:
-pronchial ụkwara ume ọkụ,
nke a na-ebute n'ime ọgwụ, na
-akwukwo na atopic dermatitis.
Ọnọdụ akpụkpọ anụ na-eme na Methylprednisolone ntụ ntụ gụnyere:
-ọbụ psoriasis na
-nke seborrheic dermatitis.
A na-emeso ọrịa methylprednisolone raw ntụ ntụ na nsogbu mkpali nke uvea, iris, conjunctiva na irighiri anya nke anya.
A na-eji ntụ ntụ nke methylprednisolone mee ihe maka ịgwọ ọnya na otutu sclerosis ọ bụ ezie na iji ha na ọnọdụ ndị a bụ arụmụka.
6. Methylprednisolone raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
Methylprednisolone raw ntụ ọka Marketing
Esi zụta Methylprednisolone ntụ ntụ si AASraw
Methylprednisolone raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka: